Inona ny kaonty Offshore & Nahoana no tokony hanana izany aho?
Kaonty any amin'ny oniversite any ivelany: inona? Maninona no manana iray?
Ny zavatra voalohany tokony hoeritreretina rehefa mandinika offshore bank izany dia tena mitovy amin'ny banky ambanin'ny arabe. Azonao jerena an-tserasera ny kaontinao. Azonao atao ny mamindra ny fandefasana tariby amin'ny banky ao anaty kaonty. Betsaka ny banky any ivelany izay manana carte de debit mifandray amin'ny kaonty. Ankoatr'izay, ny orinasam-pifandraisana ivelan'ny serivisy dia manolotra karatra fiomanana efa nomanina any ivelany fa afaka mifandray amin'ny kaontinao any ivelany ianao.
Fantatrao fa ny kaonty eo an-toerana tsy misy vola kely vita ao anaty lavaka cubby misy ny anaranao eo amboniny. Ny kaontin'ny bankinao dia data fotsiny amin'ny solosaina amin'ny tamba-jotra banky izay ahohanana ireo mpizara manerana izao tontolo izao.
Raha mandeha any an-tany hafa ianao amin'ny fialan-tsasatra, mbola afaka miditra ny kaontinao ianao, manala vola, sns. Toy izany koa ny kaonty bankinao any ivelany kaontin'ny kaody; mety niforona tao amin'ny tambajotra informatika eran-tany mitovy amin'ilay banky akaiky anao.
Noho izany, tsy maninona na misondrotra eo amin'ny zorony na amin'ny lafiny hafa amin'ny planeta. Na izany na tsy izany, ny volanao dia mitovy: amin'ny tamba-jotra solosaina manerantany.
Fiarovana ny Banky Offshore
Momba ny fiarovana ny banky dia tsarovy fa misy fenitra ara-bola iraisam-pirenena izay tsy maintsy atrehan'ny banky. Izany hoe, alohan'ny handraisan'ny banky ny mpamatsy vola avy any ivelany dia tsy maintsy mandalo fitiliana ara-bola vitsivitsy. Ohatra, alohan'ny banky iray any Belize, Nevis, Cook Cook, Switzerland na ny Cayman Islands dia afaka mandefa ny fifindrana tariby amin'ny dolara amerikana, amin'ny ankapobeny dia mila banky amerikana mpitantana azy. Ny fahazoana fifandraisana ara-bola amin'ny répertoire dia misy fepetra takiana. Ohatra, tsy maintsy manaporofo amin'ny andrim-panjakan'i Etazonia fa ny salan'isa ara-bola ananany dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena hentitra. Ankoatr'izay dia tsy maintsy manohy mitohy ireo fitsapana ireo mba hitazonana ny fifandraisana.
Ankoatr'izay, misy ny fitsipi-pitondran-tena henjana ao anatin'ny fanjakana tsirairay avy. Ny fepetra iray lehibe sy haingana dia ny hoe tsy maintsy mihazona tahiry renivohitra be ny banky mba hahazoana antoka ny fiarovana ny mpitrandraka vola. Ankoatr'izay, manara-maso tsy tapaka ny banky ireo mpanamboatra. Izany dia manampy amin'ny fahatokisana fa ny banky dia mitoetra amin'ny fanarahan-dalàna ary hitazona ny lazan'ireo ivontoerana ara-bola malaza ity. Misy ferana ny isan'ny, ny habe ary ny filaminana ilaina amin'ny fampindram-bola sy ny fampindram-bola amin'ny banky. Misy ny fangatahana tatitra isan-taona. Ankoatr'izay, ny tompon'andraikitra ao amin'ny banky dia tsy maintsy mandalo fisavana arakaraka ny tena izy alohan'ny ahafahan'izy ireo mitantana amin'ny andrim-panjakana.
Misy ny rafi-pandaminana iraisam-pirenena ho an'ny banky. Ireo no fenitra tsy maintsy arahin'ny banky manerantany mba hampitana vola any ivelany. Anisan'izany ny Basel III. Ny Basel III dia sata mifehy ny fenitra momba ny fenitra. Ny Komity Basel momba ny fanaraha-maso ny banky dia namolavola ireo fenitra ireo ho an'ny indostria. Ny tanjon'izy ireo dia ny hanamafisana sy hampiray ny fitsipika, ny fanaraha-maso ary ny fitantanana ny loza amin'ny indostrian'ny banky manerana izao tontolo izao. Ny tanjon'ireo fepetra ireo dia ny manao ireto manaraka ireto;
Manatsara ny fahaiza-manaon'ny banky amin'ny fikarakarana ny fipoahana vokatry ny adin-tsaina ara-bola sy ara-toekarena, na inona na inona loharanom-baovao
Hanatsara ny fitantanana ny risika, ny asa ary ny fikarakarana
Manamafy ny fangaraharan'ny banky sy ny fampahalalam-baovao
Misy ny fenitra iraisam-pirenena ho an'ny famokarana ny alikaola sy ny fitaovana fanaraha-maso ny risika izay tsy maintsy ataon'ireo banky. Mamita izany amin'ny alàlan'ny fiantohana fa ny orinasam-bola iray dia manana habetsahan'ny entona feno kalitao avo lenta (HQLA). Ireo dia akora mora foana ny banky ary avadika avy hatrany ny vola. Afaka mitodika any amin'ny tsenam-barotra tsy miankina ireo andrim-panjakana mba hahafahana manatanteraka ny fitakian-dry zareo amin'ny fizotry ny fihenan-tsasatra mandritra ny andro fitsidihan'ny 30. Ao ny fepetra takian'ny Net Stable Fund. Ireo fitsipika ireo dia mitaky banky hitahiry mombamomba ny famatsiam-bola ho an'ny fotoana fohy sy ny fotoana maharitra.
Ny Banky Offshore dia mahazatra
Ny banky Offshore dia tena mahazatra. Mihoatra ny 2.7 tapitrisa amerikana voalaza fa manana offshore accounts. Ny banky any ivelany dia tsy natao ho an'ny 1% ambony ihany. Ny eo amoron-tefitry ny banky dia misy na iza na iza te hanararaotra ireo tombontsoa isan-karazany. Betsaka ny banky avy any ivelany no manome vola kely indrindra. Noho izany, dia manolotra safidy azo tanterahina na iza na iza maniry ny hanangana kaonty eny ampitan-dranomasina izy ireo.
Ankoatra izany, ny tombontsoa amin'ny fananana banky offshore mandehana mihoatra ny fotoana fampiasa amin'ny fampiasam-bola hafa ary manafina ny fanananao. Ireo tombontsoa ireo dia misy fiantraikany amin'ny olona antonony ary afaka manatsara betsaka ny traikefanao momba ny banky isan'andro. Raha momba ny filaminana, ny fidirana, ny fanamorana ary ny fandriam-pahalemana, dia toa ny vahaolana ara-bola any ivelany no vahaolana. Vita izao dia andro nieritreretana ny banky vahiny ho toy ny paikady lavitra izay mety sy manafintohina hetra avy amin'ny governemantanao. Mifanohitra amin'izany, ara-dalàna, ara-pitondran-tena ary etika izany rehefa atao tsara. Ankoatr'izay, dia safidy tena azo tanterahina sy maharitra ary azon'ny rehetra vonona manararaotra izany.
Nahoana no mianatra bebe kokoa?
Betsaka ny Amerikanina tsy mahalala ny tena fitrandrahana any ivelany. Saingy, indrisy, izao no fotoana vao manomboka mianatra ny marina momba izany. Ny banky any ivelany dia ny fampiasana rafi-bola amina banky ao amin'ny firenena iray hafa noho ilay iainanao; tena mety amin'ny fanjakana mafy sy maharitra. Betsaka ny tombontsoa ara-bola sy ara-dalàna amin'ny banky any ivelany. Mety hitranga izany noho ny toekarena amin'ny doldrums. Mety ho noho ny rafitra fitahirizam-bola tsy manam-paharoa mifatotra amin'ny governemanta izay manana trosa be, toy ny any Etazonia. Raha tsy izany, dia toa ny tsy fahombiazan'ny Washington Mutual, ny banky be renivohitra tsy nahomby tamin'ny fitsapana ny adin-tsaina.
Araka izany, toa ilaina ny manomboka mandinika ny banky any ivelany izay safidy ara-dalàna. Miaraka amin'ny rafitra amerikana sy ny banky eropeana maro dia tsara, azonao atao koa ny mijery ireo antony horesahantsika eto ambany.
Ny serivisy any amin'ny banky dia manolotra fampivondronana vola amin'ny tahiry. Tena ilaina izany amin'ny fitazonana ny portfolio fampiasam-bola maharitra sy maharitra. Vitsy be ny banky an-trano manolotra safidy hitana vola isan-karazany. Ny fitazonana fitaovam-piadiana any ivelany any amin'ny vola samy hafa dia ahafahan'ny iray manararaotra ny fidinana amin'ny fihenan'ny vola. Taorian'ny loza nahatonga ny loza 9 / 11, olona maro no nanokatra kaonty banky kanadianina ary namadika dolara amerikana ho an'ny dolara kanadiana. Betsaka no nahazo tombony 30% tsara tarehy satria ny dolara amerikana no nihanahery ary ny Kanada dia nihanatanjaka. Noho izany, ny fihazonana vola isan-karazany dia afaka manatsara ny fampiasam-bola, manolotra fiverenana avo kokoa amin'ny fepetra tsena sy ny risika ambany kokoa.
Izany dia mamela ny fandaniana isan-karazany. Tsara homarihina ihany koa fa na dia tao anatin'ny 2008 aza ny toeran'i Etazonia dia nihanondraka ny tsenan'i Azia. Mametra anao ny famerana ny orinasanao an-trano. Araka izany, mety te-hijinja ny tombontsoa azo avy amin'ny ekonomia ianao raha toa ka tsy eo ny toekarena ao an-trano. Raha ny tena izy, dia mety hieritreritra ny hanisy kaonty mihoatra ny iray ianao. Noho izany, azonao atao ny miantoka ny tenanao fa manararaotra tanteraka ny lalàna momba ny banky iraisam-pirenena mahasoa. Any Switzerland, ohatra, ny banky dia orinasam-pitantanana ny fampiasambola. Ny banky soisa dia miaraka amin'ny sasany amin'ireo mpitantana vola ambony indrindra eto an-tany. Noho izany, mpiomana ara-bola ao amin'ny andrim-panjakana dia afaka manolotra portfolio iray izay manolotra fitambaran'ny fitomboana sy fiarovana betsaka. Etazonia dia mametra ny isan'ny varotra izay ahafahan'ny mpivarotra mandray anjara. Ny varotra ivelany teny an-tsena dia nanala io satrony io.
Ireo banky any Etazonia dia matetika manome tombony amin'ny vola be. Ohatra, amin'ny taham-pivarotana amin'izao fotoana izao, raha toa ianao ka mametraka $ 1,000 USD amin'ny volana Janoary, dia mahazo tombony 10 $ fotsiny ianao amin'ny taona. Ny sasany dia mety hahatsapa fahafaham-po, na hafaliana mihitsy aza, mba handoavana vola. Na izany aza, raha ampitahaininao amin'ireo banky iraisampirenena sasany, dia afaka mahita ny tahan'ny zanabola somary avo kokoa ianao eo am-pandresena. Mahaliana ny resaka izahay mba hahafahanao manangana kaonty miorina amin'ny tombontsoa fotsiny ihany. Ny toerana toa an'i Aostralia, Soisa, Holandy, ary Frantsa dia mety tsy hanome ny tombam-bola be amin'ny fitahirizan-dresaka ihany, fa notononina koa ny trano ho an'ny sasany banky azo antoka maneran-tany.
Mivadika haingana ny vola
Miaraka amin'ny fanamafisana ny harenanao, na dia kely aza ny kaonty offshore dia ahafahanao mandingana haingana. Ireo mpampiasa kaonty any ivelany dia manana ny fahafaha-mamindra ny volany, raha ilaina. Ohatra, mety amin'ny toe-javatra iray izay ilaina hiarovana ny fananana amin'ny raharaha ianao. Ankoatr'izany, mety manana fifanakalozana tsy tapaka ianao amin'ny fifanarahana momba ny orinasam-bola iraisam-pirenena. Samy manana ny lanjany lehibe izy ireo.
Amin'izany andalana izany dia fantatsika fa matetika ny banky an-trano dia mitahiry vola be dia be tokoa amin'ny famoaham-bola be. Izany dia manasarotra ny fidirana mora foana amin'ny volanao rehetra. Ny fanamby dia izao: be dia be ny toe-java-misy izay mety hamonoana io karazana fetra io raha ny fiarovana ny fananana. Nahoana no zava-dehibe izany? Ity no antony. Ahoana raha tsy afaka misintona haingana ny volanao ianao? Izany hoe, mety manana mpisolovava amin'ny zotra ianao ao ambadik'izay te hanafaka ny kaontinao mandra-pisian'ny banky azy.
Noho izany, ny fananana kaonty any ivelany dia mampifandray ny tànan'ny mpifanandrina aminao. Azonao atao ny mamindra haingana ny volanao ary / na manana dingana tsy atokisan'ny mpandeha ivelan'ny tanàna hiarovana anao.
Angamba ny fahatsapana mahazatra kokoa amin'ny banky ivelan'ny banky dia manafina ny fananana avy amin'ny hetra. Raha ny tena izy dia mahalana izany, satria ny banky afovoan-tany dia mangarahara ho an'ny tanjona hetra. Izany hoe, misy fomba sasantsasany ahafahana misafidy voafaritra voafetra raha mampiasa ny kaonty offshore. Any amerika mifindrafindra $10,000 Ny USD na mihoatra, amin'ny fotoana rehetra, dia tsy maintsy mitatitra izany. Na izany aza, azo atao ny manana kaonty miaraka amin'ny $ 10,000 USD raha tsy mitatitra azy. Mila mitatitra anefa ianao raha toa ianao ka manao sonia amin'ny kaonty any ivelany. Na izany aza, tena manoro hevitra anao izahay mba hiresaka amin'ny mpanolo-tsaina momba ny hetrao.
Ny banky azo antoka dia iraisam-pirenena
Fahombiazana amin'ny banky azo antoka. Ny rafitra tahirim-bola federaly izay manohana ny banky amerikanina dia, izay tohanan'ny firenena be mpitrosa indrindra amin'ny planeta. Ankoatra izany, ny antontan-taratasy ambony dia namoaka lisitr'ireo banky azo antoka indrindra eran-tany; tsy nisy na iray aza tamin'ireo banky amerikanina. Tsy misy. Raiso, ohatra, ny famoahana ny lisitr'ireo banky azo antoka 50 isan-taona. Ny zavatra manaitra ahy dia tsy manonona banky amerikana lehibe izany. Raha ny momba an'ity fanoratana ity, ny banky amerikana tokana amin'ny lisitra "azo antoka indrindra" dia banky fambolena kely telo, ka ny lisitry ny 30, 45 ary 50.
Araka ny filazan'ny Global Fiance, eto ireo firenena manana banky azo antoka indrindra:
Amin'ireo firenena voalaza etsy ambony ireo, Switzerland sy Luxembourg ihany no hanokatra kaonty raha tsy mila mandeha any an-toerana. Ny fametrahana farafahakeliny kely dia lehibe. Ny banker amin'ny farany dia ho avy hitsidika anao manokana.
Ny eo an-toerana anefa, mora ny mahita banky any amin'ireo firenena trosa ambany izay tsy (ary tsy) miloka amin'ny volanao. Vokatr'izany dia afaka mitazona vola be kokoa izy ireo hialana amin'ny fialanao. Rehefa mametraka azy amin'ny resaka fampiasam-bola ianao, aiza ianao no te-hampiasa ilay volanao? Ao amin'ny orinasa milomano vola? Sa ny tratry ny trosa? Ny firenena toa an'i Suisse sy Luxembourg dia manana fitsipika hentitra amin'ny banky. Manatanteraka "fisavana sy mizana" izy ireo amin'ny fomba fanao kaonty amin'ny banky rehetra. Betsaka ny banky sy firenena any ivelany izay manana rafitra mitovy. Ireo rafitra ireo dia manampy amin'ny fiantohana ireo olona mitady banky eny amoron-dranomasina afaka manao izany amin'ny fomba azo antoka sy tsy misy tomika.
Ny fiarovana lehibe
Fanampin'izay, hoy ny manam-pahaizana maro momba ny fiarovana ny fananana, rehefa tonga any am-pianarana any ivelany ianao dia tsy dia manintona loatra ny raharaha amin'ny sehatra anatiny. Izany hoe, raha afatanao ny ampaham-bolanao amin'ny kaonty any ivelany dia sarotra kokoa ho azy ny maka ny fahavalonao. Mety tsy hampanahy anao amin'ny rehetra izany; fa ao an-tsaina foana fa sarotra kokoa ho an'ny olona manafaka ny kaontinao raha sendra mipetraka any amin'ny banky any ivelany izy ireo. Ho an'ny fiarovana maharitra, ny manam-pahaizana dia manoro hevitra ny mitazona ny kaontinao amin'ny orinasa any ivelany ary / na ny fahatokisana. Tsy vitan'ny hoe mitokana ny fiainana. Izy ireo dia afaka manolotra fiarovana ara-dalàna ihany koa raha toa ka mitaky ny famerenan'ny famatsiam-bola ny volan'ny fitsarana.
Mametraka kaonty Offshore
Mety ho tsy mahagaga izany. Miha lasa miha sarotra ho an'ny Amerikanina ny nametraka kaonty eo ampitan'ny tanàna. Tena ilaina io fampahalalana io. Noho izany, tena ilaina ny manontany matihanina matihanina hahita banky tsara indrindra ho anao. Izay ny serivisy omen'ny fikambanana. Fantatsika izay banky hanaiky ny mpanjifa vahiny. Tianay iza amin'ireo banky heverintsika fa mahery indrindra sy azo antoka ary manome tolotra mahavariana indrindra.
Zavatra sasany hikaroka:
Fandraisana ho an'ny mpanjifa amerikana. Tsy ny banky rehetra no mbola manaiky ny mpanjifa amerikanina sy kanadiana ary eoropeana.
Fahaiza-manokatra kaonty haingana. Misy ny banky sasany any ivelany izay manana safidy ho an'ny mpanjifa hanokatra kaonty amin'ny Internet na amin'ny telefaona. Mazava ho azy, mila manome koa ireo antontan-taratasy ilainao ho fantatry ny mpanjifa ianao. Ny banky hafa dia mitaky anao hitsidika mivantana ny bankiny hanokatra kaonty. Izay no nilaza fa, misy amin'ireo sampana ireo dia manana sampana an-trano. Noho izany, ny sasany dia ahafahanao manangana kaonty any ivelany amin'ny alàlan'ny sampana eo an-toerana. Ny olana dia ny fitsarana amerikana dia manana fahefana amin'ny sampana ao an-toerana. Noho izany dia zava-dehibe ny fampiasana banky izay tsy mifanalavitra amin'ny toeran'ny US.
Ny ambany indrindra. Ny ankamaroan'ny banky dia mitaky famatsiam-bola kely indrindra hanokafana kaonty (izay mandeha amin'ny sehatra an-trano sy iraisam-pirenena). Noho izany dia te-mitady banky ianao raha kely indrindra noho ny antony ho anao.
Banks izay manana mpanjifa eo an-toerana ary koa mpanjifa vahiny. Afaka matoky ianao fa ny banky manolotra serivisy any an-toerana dia ho voadinika tsara. Banky izay tsy manana mpanjifa vahiny fotsiny, dia matetika antsoina hoe banky "Class B". Ireo banky ireo dia mety ho mora hitan'ny mpanao régulator. Ireo banky "Class A" dia afaka mandray ireo mpamatsy vola ao an-trano na any ivelany.
Fampahalalana ny hetra
Betsaka ny banky vahiny manana lalàna momba ny tsiambaratelo ary tsy mamoaka ny mombamomba ny kaonty. Ny tatitra momba ny hetra kosa dia olana hafa. Ny andrim-panjakana iraisam-pirenena no tompon'andraikitra amin'ny famoahana endrika sasany ho an'ny mponina amerikana sy olompirenena. Manampy azy ireo hanaraka ny fitsipika mifehy ny hetra amerikana ireo. Ny andraikitra dia mitoetra amin'ny tompon'ny kaonty ihany koa hitatitra azy ireo araka ny tokony ho izy. Rehefa mametraka kaonty eo am-pivoriana ianao dia mila manadino ny lalàna momba ny hetra aloa. Zava-dehibe ny manamarika fa raha ny fomba izay dia midika ho fanazavana ilaina fotsiny fa tsy toro-hevitra momba ny hetra. Vinavinaina ny fanovana. Noho izany, mangataha torohevitra voalohany avy amin'ny kaonty manana fahazoan-dàlana. Raha izany no voalaza, dia voalaza fa tokony hitadidy ireto manaraka ireto ny Amerikana.
Tsy maintsy mitatitra ny vola miditra maneran-tany ianao. Izany dia mihatra na dia mandoa hetra amin'ny volanao aza ianao. Ny fitazonana ny vola eo an-dalantsara ary ny fandoavana hetra fotsiny rehefa averinao any amin'ny 1964. Ny orinasa goavam-be misy vondron'olona ifotony dia afaka miala amin'izany; fa tsy olona iray na orinasam-pianakaviana akaiky.
Tsy maintsy mandefa kaonty any ivelany any amin'ny banky mihoatra ny $ 10,000 USD ianao. Ity dia fanampin'ny tatitra momba ny vola miditra. Raha manana kaonty offstore mihoatra ny iray alina dolara ianao dia mila mametraka endrika FBAR.
Fidiram-bola mahaliana. Raha manana tombontsoa ianao (fidiram-bola, fatiantoka, tombony, deductions, fandaniana ary famaranana) amin'ny vola vahiny mihoatra noho $ 50,000 USD amin'ny andro farany amin'ny taon-trosa na $ 75,000 USD amin'ny fotoana rehetra mandritra ny taona, Soraty ny endrika 8928.
Sazy sy tombontsoa ho an'ny fitaterana tsy ara-dalàna ny hetra. Tsy misy fitsipika mifehy ny fanesorana hetra. Ny sazy dia mitentina amin'ny $ 10,000 ka hatramin'ny an'arivony dolara. Ny fandroahana hetra, ny tatitra diso ary ny tsy fanaovana tatitra dia mety hitondra sazy henjana. Ka samia amin'ny fanajanao ny lalàna mifehy ny hetra rehetra.
Mandray fanapahan-kevitra tsara
Ankoatra izany rehetra izany dia mila mitadidy ihany koa fa tsy misy banky iray ho an'ny rehetra. Na dia mila banky be mpividy aza ny olona sasany amin'ny fahazoana fidirana mora amin'ny fakana an-keriny, dia mety hitady olon-kafa ny "tombon-dahiny".
Mifanohitra amin'ny fiheveran'ny besinimaro, ny banky any ivelany dia tsy ny hetra manala hetra na manafina ny fanananao. Izy io dia momba ny fananganana ny orinasanao sy ny fahazoana fananana avy amin'ny litigation vexatious. Izany hoe, olona maro no mametraka kaonty any ivelany fa hahazo tombony amin'ny fitsipika iraisam-pirenena mahasoa.
Rehefa mandeha ny fotoana, raha ny marina dia toa tsy dia misy ny fanontaniana hoe "Misy vola ve ny banky vahiny?" Ary bebe kokoa ny hoe "Mety amiko ve ny banky an-trano?" Tsy sanatria izany. Io no vokatra mivantana avy amin'ny rafitra banky shaky. Rafitra iray notohanan'ny governemanta amin'ny trosa; dia fanjakana mandrehitra ny volan'ny vahoaka.
Mandritra izany fotoana izany, ao anaty alahelo ny tahirim-bolam-panjakana. Raha mieritreritra hafa ianao dia ampitahao amin'ireo masoivoho mitovy habe amin'ireo firenena tsy dia trosa. Mazava ho azy fa ny fanontaniana dia tsy misy madiodio intsony raha tsy milamina ny banky any ivelany. Ny fanontaniana tokony hapetrakao dia ity. Iza ilay banky amoron-dranomasina azo antoka hampiasaintsika amin'ny tombontsoantsika manokana, ara-dalàna, fandraharahana ary ara-bola?
Banky Offshore mamela ny fiainana ara-bola mitombo. Olana sy orinasa marobe manerantany no manararaotra ireo tombontsoa azo itokisana ireo. Ny mponin'i Etazonia dia afaka mahazo valim-bola mitovy amin'io olona sy orinasa io amin'ny alàlan'ny banky any ivelany.
Ny fiarovana ny volanao amin'ny fisaraham-panambadiana, ny ady ary ny ady ara-dalàna dia antony iray hafa. Azonao atao ny manokatra kaonty banky any ivelany amin'ny anaran'ny orinasa any ivelany mba hanomezana fiainana manokana sy fiarovana. Ny kaonty any ivelany dia tsy natao ho an'ny mpanankarena fotsiny. Misy fiakarana miavaka amin'ny isan'ireo Amerikana izay mametraka ny volany ao amin'ny kaontin'ny vola manokana. Ny tanjon'ity fanoratana ity dia ny hanome fahalalana sy vaovao momba an'io lohahevitra io.
Tsiambaratelo ny kaonty Banky Offshore
Ny ankabeazan'ny mpiasan'ny kaonty any ivelany dia misy fitsipika sy fitsipika tsiambaratelo. Izy ireo dia natao hanampiana amin'ny fiantohana fa tsiambaratelo ny mombamomba ireo mpanolotra vola sy mpampiasa vola ary koa ny fifanakalozana mifandraika amin'izany. Izany hoe, ny fizahana mikorontana na maso prying dia tsy ahafahana mijery ny raharaha ara-bola. Na dia efa saika aza io tsiambaratelo io dia tsy azo atao ny manome antoka ny tsiambaratelo sy ny tsiambaratelo. Ny andrim-panjakana rehetra eto an-tany dia manana adidy ara-dalàna tanteraka. Noho izany dia tokony hanao tatitra sy hanaraka ny fanadihadiana izy ireo mikasika ny asa ratsy ataon'izy ireo. Izany, mazava ho azy, dia misy ny fampihorohoroana, ny famotsiam-bola, na ny vokatry ny varotra rongony tsy ara-dalàna.
Saingy, amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy misy fiampangana heloka bevava. Ka ny fampahalalana momba ny fidiram-bola dia tazonina amin'ny endrika saro-piaro. Ireo banky offshore Ny fanjanahana dia natao hanomezana faran'izay mitoetra ao anaty tsiambaratelo, ary hiasa amin'ny fitsaràna sy hiaro ny mombamomba ny mpanondrana. Ity karazana tsiambaratelo avo ity dia marim-pototra indrindra satria mifandraika amin'ny fiarovana ny fananana amin'ny fitsabahana anaty trano. Ohatra, ny raharaha sivily toy ny fisaraham-panambadiana na tokan-kianja mifaninana dia ady isan'andro isan'andro amin'ny fitsarana.
Tsy an'ity banky ity ny mampahafantatra ny mombamomba ny tsiambaratelo na ny mpizara vola. Noho izany, nanao fomban-drazana fotsiny izy ireo ary nanao fanandramana hentitra, izay atrehan'ny masoivoho ataon'ny governemanta. Izay mety hitovizan'ny lesoka na fiatoana amin'ny tsiambaratelo dia hanapotika ny fahatokisan'ireo tompon-kaonty hafa. Noho izany dia hijoro izy ireo hamoy ny asan'ny banky lehibe.
Na dia ny ambaratonga lalina sy malefaka kokoa noho ny tsiambaratelo sy ny tsiambaratelo dia mora azo. Ny olona iray dia afaka manatsara ny fiainana amin'ny alàlan'ny fiara mandeha amin'ny fananana toy ny International Business Company (IBCs) na ny matoky ny Offshore. Ireo fitaovana ireo dia manome tendrombohitra fiarovana raha oharina amin'ny hoe "fanokafana kaonty amin'ny banky fotsiny."
The tanjona na iza na iza mitady hanokatra kaonty banky any ivelany na mihoatra izany aza. Ny fikapohana ny fifandanjana mety eo amin'ny fiarovana ny fananana, ny tsy fantatra anarana, ny fiarovana ary ny fidirana dia zava-dehibe ny hananana tari-dalana. Aza adino ny mitana mpanolo-tsaina iray hitady ny vahaolana mety aminao.
Fampahalalana fanampiny momba ny banky any ivelany
Ny fanapahana malaza momba ny kaonty any ivelany dia azo jerena amin'ny faritra maro eran'izao tontolo izao. Na izany aza, tena zava-dehibe tokoa ny manangana orinasam-pandrosoana any ivelany hananana kaonty any ivelany. Ny fanapahana izay manolotra ny fiainana manokana indrindra ho an'ny tompona orinasa any ivelany dia tsy voatery hitovy amin'ny fanapaha-kevitra amin'ny orinasa mpamatsy vola amin'ny kaonty any ivelany. Mety hampandeha fiara Mercedes iray. Fa io fiara io dia tsy hanana kodiarana Mercedes. Azo inoana fa mitondra kodiarana Goodyear, Firestone, Continental an'ny Michelin kodiarana.
Toy izany koa, te hisafidy ny fanapahana amin'ny fitaovana ara-dalàna tsara indrindra ianao. Avy eo ianao te-hisafidy ny sehatra miaraka amin'ireo rafi-bola tsara indrindra izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao.
Ohatra, dia afaka manana orinasa any amin'ny nosy Nevis sy banky any Suisse ianao. Ny lalànan'ny orinasa Nevis dia manome tsiambaratelo momba ny fananana tompony. Manolotra ny fiarahana matanjaka indrindra amin'ny fiarovana ny banky sy ny tsiambaratelo ara-bola i Switzerland. Tena zava-dehibe ny manangana fitambarana mety amin'ny filanao manokana.
Midira ao amin'ny Vahoaka
OffshoreCompany.com no tompon'andraikitra manerantany amin'ny serivisy any ivelany. Ny fikambanana dia manam-pahaizana manokana amin'ny drafitry ny tsiambaratelo ara-bola sy ny fiarovana ny fananana ho an'ny mpihaino manerantany. Ny orinasa dia tao hatramin'ny 1906. Mamporisika izay mety ho mpanjifa mety hihaona amin'ny mpanazatra ny asa fanompoana any ivelany izahay. Afaka mifandray ianao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny laharana an-tariby na fakan-kevitra momba ity pejy ity.
Ny fanokafana kaonty any ivelany dia safidy hafa sy ara-dalàna hiarovana ny volanao. Ity orinasa ity dia "tao" hatramin'ny 1906.
Nilaza izany i Robert Kiyosaki, mpandraharaha nalaza eran-tany, mpanabe ara-bola ary mpanoratra ny mpamorona NY Times. "Raha te handeha ho any ianao, dia tsara kokoa raha mitady olona efa teo izy." Rehefa miteny ara-bola ny olona mahomby, dia matetika no fahendrena raha mihaino.
Araka ny voalaza eo ambony, manodidina ny 2.7 tapitrisa amerikana dia manana ny volany ao amin'ny kaonty any ivelany. Ireo mpanao politika amerikana, mpamatsy vola mpanankarena ary olo-malaza dia samy manararaotra koa offshore bank fahafahana. Io isa io dia tsy anisany olom-pirenena 7.6 tapitrisa amerikana miaina sy banky any ivelany, hoy ny Departemantam-panjakana amerikana. Ary koa, tsy tafiditra amin'ity total ity, no isan'ny miaramila amerikana izay monina eran'izao tontolo izao. Tsy maninona na dia olom-pirenena amerikana ianao na vahiny monina any ivelany. Na inona na inona antony, ny ankamaroan'ny olona dia afaka mandray soa ara-dalàna amin'ny fananana kaonty any ivelany.
Tao amin'ny 2008 ny loza ara-bola farany teto an-toerana. Nandritra io fotoana io, nisy ny orinasam-bolan'ny banky sasany lehibe. Izany dia noho ny fanao hosoka natao tamin'ny mponin'i Amerika. Nandefa goavambe eran'izao tontolo izao izany. Vola an-tapitrisany dolara amin'ny fitahirizana sy fisotroan-dronono very. Namela olona maro no nivadika ny loza, voatery nanomboka. Iza no milaza fa tsy hitranga intsony?
Talohan'izay dia nianjera tao 2000 ny tsenan'i Etazonia. Izany dia fantatra tamin'ny hoe "dot com bubble", araka ny tadidinao. Avy eo dia tamin'io andro malaza io tamin'ny Oktobra 19, 1987. Antsoinay hoe "Alatsinainy Mainty" io daty io ary iza no miteraka vola be indrindra amin'ny andro amerikana. Niafara noho ny 500 lavitrisa dolara tsy hita eny an-tsena izany. Talohan'izay dia ny areti-bola fanta-daza malaza indrindra dia ny Fahaketrahana lehibe tao 1929. Miampy an'izany dia ny fiverimberenam-bola marobe eo anelanelan'io sy avy eo izay manimba ny vola amerikana an-tapitrisany.
Ankoatra izany, ny Amerikana dia firenena be mpividy indrindra eto amin'izao tontolo izao. Ho an'ny tombotsoam-bola amin'ny fiakaran'ny trosa ho an'ny firenena, dia misy koa ireo fahasamihafàn'ny toe-bola maro any Etazonia. Anisan'izany ny fihoaran'ny banky ... fa mety ny volanao. Tsy miantehitra amin'ny FDIC ianao handoa anao. Ny Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) dia orinasa governemanta Amerikana manome antoka ho an'ny mpamatsy vola any amin'ny banky any Etazonia. Ny hany olana dia ny hoe, eny, tohanan'ny ankamaroan'ny firenena trosa amin'ny planeta.
Ataovy izay ataon'ny mpanankarena sy ny fampahalalana
Iaraha-mahalala fa ny fampidirana ny portfolio-nao dia fomba mety handehanana. Ny fametrahanao ny volanao amin'ny tahiry, ny vola miaraka, ny vola hividianana indostrialy ary ny fananana dia safidy vitsivitsy ihany ho an'ny mpampiasa vola. Saingy raha any USA avokoa ireo fampiasam-bola rehetra ireo dia azo atao ny hisintona ny curhole mitovy. Raha misy ny fampanjariam-bola amerikana hafa dia mety hihena ao anatin'ny ampahany iray ny sandany voalohany.
Ary ahoana raha misy safidy fampiasam-bola hafa?
Ahoana raha misy fomba bebe kokoa mamatsy vola sy miaro ary manatsara ny portfolio-nao? Ary ankoatra izany, raha toa ianao ka manana bonus fanampiny momba ny tsiambaratelo amin'ny fampiasanao ny fampiasam-bola?
Ao no misy izany kaonty banky offshore Mandrosoa.
Mba hanaporofoana ny maha-zava-dehibe ny tsenan'ny kaonty offshore dia mihoatra ny $ 32 trillion dollars no napetraka ao amin'ny kaonty offshore. Ireo mpamatsy vola mivantana dia mahatsapa fa ny US dia tsy ary tsy "mankany amin'ny" toerana mba hitazonana ny volany. Amin'ny ankapobeny, raha oharina amin'ny banky azo antoka, ny US dia mihazakazaka amin'ny lisitry ny banky azo antoka indrindra manerantany.
Araka ny efa voalaza tetsy ambony, araka ny lisitry ny Global Finance momba ny "The World's 50 Safest Banks 2015," dia mitana ny laharana amerikana #30, #45 ary #50 ao amin'ny lisitr'ireo banky azo antoka indrindra eran-tany! Ny banky fambolena kely indrindra, AgriBank, CoBank ary AgFirst no hany banky amerikana nanao ity lisitra ity. Ny banky izay ampiasain'ny ankamaroan'ny olom-pirenena amerikana ho an'ny vola, Chase, Citi ary Bank of America dia tsy ao anatin'io lisitra io mihitsy.
Mahatsiaro anao ...
Ny fampidiranao vola kely kokoa amin'ny volanao noho ny tahan'ny fisondrotam-bola isan-taona dia mamafa izany. Ny fahazoana vola mampidi-doza amin'ny fampiasam-bola an-jambany amin'ny tsenambola dia tsy fomba iray ahafahanao manatratra ny tanjonao ara-bola.
The Dream American Dream
Mahazo miasa mafy isan'andro. Mety hanana orinasa ianao, mandoa ny volavolan-dalàna ary manaova fomba fiasa ara-bola. Ilay vola navelanao sy notehirizinao (ary andramo ny mampiasa vola amin'ny famindram-pon'ny tahiry) dia atody ao aminao. Izany no fisotroan-dronono ho anao, ary ny nofinofisinao amin'ny fiainana tsaratsara kokoa.
Amin'ny fotoana rehetra, ny mpisolovava tia vola dia mety manafintohina ny kaontinao amin'ny banky ka mahatonga ny volanao tsy azo tanterahana. Olana azo antoka avy amin'ny IRS, fisaraham-panambadiana, volavolan-dalàna momba ny fitsaboana tsy voaloa, olana momba ny fanampiana ny zaza na ny fanamelohana rehetra hitranga aminao dia mety hivoaka ny kaontinao amin'ny bankinao hiala ao aminao.
Na ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana aza dia voaporofo fa hiteraka fahavoazana ara-bola, maro no tsy tafarina ao. Nahoana? Satria mety ho any Etazonia daholo ny fanananao rehetra. Raha izany dia hita maso sy mora resahina amin'ny fitsarana sy ny fandroahana azy ireo izy ireo, mamela anao ao amin'ny trano mahantra.
Mampitsapa am-po, eny, ny fampitsaharana ny fanambadiana. Nefa manimba ny olona ara-bola koa. Ny dingana atao amin'ny fisaraham-panambadiana dia mety haharitra mandritra ny taona. Afaka mandroaka an'arivony na an'arivony tapitrisa dolara ny olona iray. Aorian'izay, mety hamela anao ho ampahany kely amin'ny naorinao. Manome antony iray hafa ny fahatsiarovan-tena ara-bola an'io toe-javatra io. Antony iray hafa hanoloranao ny volanao amin'ny kaonty any ivelany ao anatin'ny fitaovana ara-dalàna mahery vaika. Raha izany, dia azonao atao ny manakana azy io amin'ny fomba ratsy.
Ny famoahana ny kaonty Offshore dia manome fahafahana anao hitazona ny volanao manokana ary tsy mety ho an'ny moochers ao an-tokantrano.
Matetika ny haino aman-jery dia niresaka momba ny kaonty any ivelany fa "trano hetra" na "toeram-pivarotana hetra." Mbola taloha, ny IRS dia tsy nanadihady mafy ny vola natokana tany ivelany. Satria be dia be ny tombony azo amin'ny fampiasam-bola any ivelany. Ny IRS izao dia nanasarotra kokoa an'ireo izay mitady tombontsoa ara-bola - ary ny IRS dia maniry ny anjarany.
Tao amin'ny 2009, ny kongresy dia nandany ny lalàna momba ny fanarahana haba momba ny hetra (FATCA). Nanambara, toy ny taloha, ny olom-pirenena amerikana izay monina any ivelany dia mila mametraka ny hetra amin'izy ireo amin'ny IRS. Ny zava-baovao anefa dia ny andrim-panjakana any ivelany dia mila mampiseho ny mpanjifany amerikana izay manambola aminy. Ny ankamaroan'ny vaovao dia nahazo an'i Soisa i Soisa. Ny kaonty any amin'ny Banky Soisa dia nanana, ary mbola manana ny lazany. Firenena lehibe i Suisa raha te hampiasa vola na hanangom-bola. Fantatra amin'ny fiarovana ny banky ary maro ny safidy fampiasam-bola. Ireo fitsipika ireo dia nanjary andriamanitra. Izany dia satria adala be ny olona raha miampanga olona amerikana amin'ny fanalavirana hetra any ivelany. Raha adino ny banky ampiasain'izy ireo dia mitatitra, tsy dia misy olana loatra ny fandroahana hetra. Noho izany, dia manjary mora kokoa ny vahoaka amerikana.
Misy firenena am-polony maro, ankoatra an'i Soisa, hampiasa ny volanao.
Mariho tsara fa ara-dalàna tanteraka ny mandefa banky amin'ny kaonty any ivelany. Ny olom-pirenena amerikana dia mila mitatitra ny tombom-barotra any ivelany amin'ny IRS. Ity endrika tsotra ity ho an'ny fahazotoana tokony hataonao mandritra ny fotoan'ny hetra. Fa mariho ihany koa fa ny CPA sy ny mpisolovava izay mahatakatra ny fitsipiky ny hetra any ivelany izay afaka manampy. Ireo dia nahalala tsara an'ireo lalàna vaovao ireo ary handeha aminao amin'ny fomba fanaovana tatitra tsotra.
Ny fitazonana ny vola rehetra ao amin'ny rafitra banky amerikana amin'izao fotoana izao dia fomba fanao mahazatra, tsy azo antoka ary fanamafisana vola. Nahoana ianao no mitahiry ny famindram-ponao amin'ny famindram-pahefana iray, manimba sy mikolokolo?
Ny fanokafana kaonty any ivelany dia tsy sarotra. Na izany aza, misy ny lalàna vaovao sy ny mpitsango ho tonga hitsambikina, toy izany koa ny isan'ny offshore banks izay tsy manaiky depositer US, kanadiana na Aostralia. Noho izany, dia ilaina ny mitady orinasa iray izay za-draharaha amin'ny fisian'ny banky ivelany.
Ianao ve mahaliana ny hahita bebe kokoa? Raha izany dia eto isika mba hanampy. Misy endrika fakan-kevitra eto amin'ity pejy ity ahafahanao mamita izao. Fanampin'izany, misy isa maromaro hiantsoanao hiresaka amin'ny mpanolo-tsaina za-draharaha iray. Aza misalasala manararaotra ireo fotoana ireo ary manantona fanampiana aminay.
Ho an'ny toko 2>